WALTAJJII WALABAA AKKA MACCAAF TUULAMAA NUBARBAACHISA-Tolĕră Fiqirû Gamtă’TIIN – Beekan Guluma Erena
WALTAJJII WALABAA AKKA MACCAAF TUULAMAA NUBARBAACHISA-Tolĕră Fiqirû Gamtă’TIIN	Beekan Erena
Walga’ii Waldaa Maccaa fi Tuulamaa (Yaadannoo)
Walga’iin Waldaa Walgargaarsaa Maccaa fi Tuulamaa (Matcha and Tulama Welfare Association) ji’aan Finfineetti geggeeffamaaa ture siyaasa, hawwasummaa fi aadaa Oromoo gabbisuu keessatti gahee guddaa qaba ture. Kun haqa alagaan illee rgaa bahuu dha.
Walga’ii sun bakka Oromoon marti ilaalcha fi amantiin osoo wal hin foyin irratti hirmaatu, hawwii fi fedhii isaa mulifatu, aadaa fi afaan isaa calaqisiisu ture. Dargagootaaf ammoo carraa wal barachuu, ijaaramuu fi wal tumsuu uumaa bahe.
Suuraa kuusaa gazexessummaa koo keessaa argadhe kun walgaa’ii waldichaa bara 2004 keessa geggeeffame mul’isa. Suuraa kana gubbatti harka walqabatanii kan fuulduraa mul’atan Dr. Mararaa Guddinaa, Haji Biiftuu, Dr. Geetachew Dammaqsaa, Dr. Nagaasoo Gidaadaa faa keessatti argamu. Waldaan kun tokummaa fi saboontummaa Oromoo tiksuu keessatti qooda olaanaa baheera.
Bara 2005tti waldaan kun mootummaadhaan ugguramee, qabeenyaan isaa saamamee, hogganootni isaa kan akka obbo Dirribii Damuseefaa hidhamanii, cufamuu isaa nin yaadadha. Filannoo bara 2005 yeroo CUDn Finfinnee mo’ate, murni aangoo mootummaa qabatee ture (fayidaa siyaasaa argachuudhaaf) Waldaan Maccaafi Tuulamaa uggura jalaa bahee deebi’ee akka socho’uuf hayyama siyaasaa (political will) dabarsuu isaa illee nin yaadadha. Sana booda garuu waldaan kun deebi’ee sochii keessa hin seenne. Har’a waldaan seena qabessa kuniifi hojiin isaa kunniin Finfinnee keessatti hin mul’atu.
Carraan waldaa seena qabeessa kanaa maal tahee hafe laata?
Galmi Aadaa fi Seenaa Oromoo Finfinneetti ijaarame kunis ilmaan Oromoo walga’anii, waa’ee aadaa, aartiifi seenaa isaanii akka mari’atan, akka muli’san fi walirraa akka barataniif carraa uumuun isaa jija gaariidha. Haata’u malee waltajjiin kun suuta suuta hojii aartii murna aangoo mootummaa irra jiru hin quuqne qofa kan keessumisiisu tahuuf hin deemu laataa?
Kanaaf waltajjiin walabaa akka Waldaa Maccaafi Tuulaamaa hedduu nu barbaachisa.
← ILKAAN KEENYA AKKAMITTIIN RIGANNA LAATA? -AKKAMIIN FOOLII AFAANII BADAA (HALITOSIS) ITTISNA?- “FAYYAA TAPHA SEETEE …..!” *-Fayyaan Qabeenya! Dr. Dhinsa Yonas.
GORSA OBBOLUMMAAFI BARBAACHISOO TOKKO TOKKO -Bilisummaa Kumaatiin →